मनोरञ्जन Archives - itaharinews
एजेन्सी मुम्बई प्रहरीले शिल्पा शेट्टीका श्रीमान् तथा कारोबारी राज कुन्द्रालाई पक्राउ गरेको छ । उनलाई पोर्नोग्राफिक फिल्म बनाएको र त्यसलाई कुनै ऐपमार्फत् सार्वजनकि गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको छ । मुम्बई प्रहरीका अनुसार क्राइम ब्रान्चमा फेब्रुअरी सन् २०२१ मा एक आरोप दर्ता भएको थियो । यसको अनुसन्धान गर्ने क्रममा सोमबार राज कुन्द्रालाई पक्राउ गरिएको हो । प्रहरीले राज कुन्द्रा यसमा समावेश भएको कुराम...
बलिउड अभिनेता नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी र उनको परिवारलाई १४ दिनका लागि ‘होम क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। समाचार एजेन्सी पीटीआईका अनुसार उनीहरुलाई १४ दिनको होम क्वारेन्टाइनमा राखिएको प्रहरीले जनाएको छ । नवाज़ुद्दीन ईद मनाउनका लागि मुम्बईबाट पश्चिमी उत्तर प्रदेशमा रहेको आफ्नो गाउँ पुगेका थिए । यसकारण उनलाई परिवारका सबै सदस्यसहित होम क्वारेन्टाइनमा राखिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
काठमाडौं– नायिका महिमा सिलवालको सवारी दुर्घटनामा निधन भएको छ। बुधबार साँझ पौने ६ बजेतिर धादिङको गजुरीमा उनी सवार स्कुटरलाई विपरीत दिशाबाट आइरहेको बसले ठक्कर दिँदा उनको ज्यान गएको हो। लु २ ख १३५ नम्बरको बसले उनी सवार बा ९८ प ७०५८ नम्बरको स्कुटरलाई धादिङको गजुरीमा ठक्कर दिँदा उनको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको प्रहरी नायब निरीक्षक जनक बस्नेतले जानकारी दिए। महिमा बहिनी सर्मिलासहित चितवनस्थित घर जाँ...
काठमाडौं। प्रहरीले गायिका आस्था राउतलाई चार दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति पाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले आज राउतलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको काठमाडौं जिल्ला प्रशासनका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं सूचना अधिकारी जीवनप्रसाद आचार्यले देखापढीलाई बताए। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले राउतलाई आज जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंमार्फत म्य...
काठमाडौं । गायक रामकृष्ण ढकाल दम्पत्तिको सम्बन्धविच्छेद भएको छ । पत्नी निलम साह ढकालले दिएको सम्बन्धविच्छेदको निवेदनमा जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश विदुर कोइरालाको इजलासमा सम्बन्ध विच्छेद गर्न उनीहरुले मिलापत्र गरेका हुन् । जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार आनन्द श्रेष्ठका अनुसार गायक ढकाल र निलमले सम्बन्धविच्छेद गर्न मञ्जुर छौं भनी मिलापत्र गरेका छन् । ‘उहाँहरुले सम्बन्ध विच्छेद गर्न मञ्जुर छौं ...
काठमाडौं । गत शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आएको फिल्म ‘छ माया छपक्कै’ले बुधबार राजधानीमा विशेष शो आयोजना गरेको छ । जयनेपाल चलचित्र भवनमा आयोजित विशेष शोमा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन अनन्त, पर्यटन मन्त्री योगश भट्टराई, सामान्य प्रसासन मन्त्री लालबाबु पण्डित, नेपाली कांग्रेसका प्रवक्त विश्वप्रकाश शर्मा, सञ्चारमन्त्री रवि लामि...
मुम्बई । मुम्बई प्रहरीले बलिउडका अभिनेता सलमान खानको घर रेखदेख गर्न बसेका कामदारलाई पक्राउ गरेको छ । विगत २० वर्षदेखि खानको घर रेखदेखमा खटिएका शक्तिसिद्धेश्वर राणालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । उनलाई बुधबार पक्राउ गरिएको छ । सलमान खानको गोराईको घरबाट पक्राउ परेका राणा एक अपराधी रहेको प्रहरीले जनाएको छ । राणामाथि जबरजस्ती चोरी र हमलाको मुद्दा दर्ता रहेको छ । उक्त मुद्दामा जमानतमा बाहिर आएक...
शिल्पा पोखरेललाई तत्काल पक्राउ नगर्न सर्वोच्चको आदेश !
काठमाडौं । अभिनेत्री शिल्पा पोखरेललाई तत्काल पक्राउ नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतले बहुविवाहसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्चसम्म पुगेकी शिल्पालाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले तत्काल पक्राउ नगर्न आदेश दिएको हो ।
अक्षय कुमार पछिल्लो समयमा दुनियाँका सय सर्वाधिक कमाउने सेलिब्रिटीको सूचीमा यस वर्ष भारतका एक्ला सेलिब्रिटी बने । सन् २०१९ को ‘हाइएस्ट पेड सेलिब्रिटी’ को सूचीमा अक्षय ३३ औं स्थानमा छन् । उनको कमाई ६।५ करोड डलर ९७ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ० हो । अक्षयले यसबारे अन्तरवार्तामा खुलेर कुराकानी गरेकी छिन् । भारतीय संचार माध्यमसँगको अन्तरवार्तामा अक्षयले भने, ‘स्वभाविक रुपमा राम्रो लाग्छ । तर म यस्ता आर्टिकल...
१८ वर्ष नपुग्दै यौन सम्पर्क गरेका यी १० चर्चित कलाकार, जस्ले आफ्नो अनुभव खुलेरै सुनाए !
बलिउड : कतिपय बलिउड तथा हलिउड कलाकारहरु यौनको विषयमा खुलेर कुरा गर्छन् । से क्सको विषयमा उदार कलाकारहरु जसले १८ वर्ष पुग्नु भन्दा अगाडि नै यौ न सम्पर्क गरेको बारेमा हामीले जानकारी प्रस्तुत गरेका छौं । रणबीर कपुर : एक म्यागजिनको अन्तर्वातामा बलिउड नायक रणबीर कपुरले आफ्नो पहिलो यौ न सम्पर्क १५ वर्षको उमेरमा भएको बताएका छन् । उनले आफ्नो प्रेमिकासित यौ न सम्पर्क गर्दा उनी केवल १५ वर्षका थिए । सन...